Dowladda Spain Oo kala Dirtay Maamul Goboleedkii Gobolka Catalonia.
Saturday October 28, 2017 - 07:38:07 in Wararka by Super Admin
Wadanka Spain waxaa wali ka taagan xaalad siyaasadeed oo aad u adag kadib markii gobolka Catalonia uu ku dhawaaqay in uu yahay dowlad ka madax banaan Spain inteeda kale.
Markii ugu horraysay Xukuumadda Madrid ayaa sheegtay in ay kala dirtay maamul goboleedka Catalonia si looga feejignaado xaalad cakirnaan hor leh.
Mariano Rajoy oo ah R/wasaaraha Spain ayaa ku dhawaaqay in uu kala diray maamulkii Calatonia wuxuuna casilay dhammaan mas’uuliyiinta dowlad hoosaadka gobolka sida R/wasaarihii dowlad goboleedka iyo taliyihii ciidamada Booliska.
Spain waxay ku dhawaaqday in la qaban qaabiyo doorashooyin waqtigoodi lagasoo hormariyay oo ka dhici doonto gobolka Catalonia, lama oga mowqifka ay siyaasiyiinta gobolka ka qaadan karaan go’aanka ay xukuumaddu soo saartay.
Gobolka Catalonia waa gobolka ugu badan ee uu kasoo baxo dhaqaalaha Spain oo horay loo oran jiray Andalus islamarkaana ahaa wadan ay leeyihiin dadka muslimiinta ah, Spain waxay xubin ka tahay Ururka Midowga Yurub waana wadanka kaliya oo khalalaaso dhanka siyaasadda ah kajiraan ee Ururkaasi kamid ah.